လက်ငင်းစာအုပ်၌စာရင်းပေးသွင်းခြင်းအားဖြင့် 8x ပိုပြီးဝင်ငွေရရှိမှုဝင်ငွေ
လက်ငင်းဘွတ်ကင် ကားပိုင်ရှင်မဆိုငှားရမ်းတောင်းဆိုချက်ကိုအလိုအလျှောက်သူတို့ရဲ့ပြက္ခဒိန်တွင်ရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းရက်စွဲများဘို့အတည်ပြုခံရဖို့နှင့်ပိုင်ရှင်ဘာသာရပ်ကားတစ်စီးလွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲကြိမ်သတ်မှတ်ထားသောခွင့်ပြုမထွက်ရကားများပေါ်တွင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်တစ်ဦး feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုအဆိုပါလက်ငင်းလုပ်ငန်း booking ပါသလား?
အဆိုပါလက်ငင်းဘွတ်ကင်အင်္ဂါရပ်ငှားရမ်းသည့်ဘွတ်ကင်ကိုအတည်ပြုရန်ကားပိုင်ရှင်များအတွက်စောင့်ဆိုင်းရန်မလိုဘဲချက်ချင်းကားတစ်စီးကြိုတင်ယူထားရန်ခွင့်ပြုသည်။ တစ်ဦးငှားရမ်းကားတစ်စီးရွေးချယ်ပြီးတာနဲ့သူတို့နေတဲ့တုန့်ပြန်စရာမလိုဘဲထိုသို့ပေးဆောင်နိုင်ပါတယ် ကားတစ်စီးပိုင်ရှင်။ တစ်ဦးကအတည်ပြုအီးမေးလ်ထို့နောက်ငှားရမ်းရက်စွဲများနှင့်ငှားရမ်းသူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုလည်းပါဝင်သည်သောအငှားသဘောတူညီချက်ပုံစံနှင့်အတူနှစ်ဖက်စလုံးမှစလှေတျတျောကိုခံရပါလိမ့်မယ်။
လက်ငင်းဘွတ်ကင်ပိုင်ရှင်တွေကသူတို့ဝင်ငွေရရှိမှုကိုတိုးမြှင့်ရန်အဘို့အလုံခြုံနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ငှားရမ်းလုံခြုံ drivers တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အပေါငျးတို့သလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရပါမည်။ ထို့အပြင်ပိုင်ရှင်ရဲ့ကားငှားရမ်းမှုကာလကြာချိန်များအတွက် Viriyah ရဲ့ပြည့်စုံအာမခံမှတစ်ဆင့်အာမခံထားသည်။
အဆိုပါငှားရမ်းတောင်းဆိုချက်ကိုပို့ပေးပြီးတာနဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ် - အခြားမည်သည့်ငှားတစ်ဦးကမော်တော်ကားကလပ်ငှားရမ်းနှင့်အတူအမှုဖြစ်သကဲ့သို့ - ထိုငှားရမ်းမှုသဘောတူညီချက်။ ပုံစံကားများ၏ပို့ဆောင်မှုမပြုမီနှစ်ဖက်စလုံးအားဖြင့်ပြီးစီးခဲ့နှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးရန်လိုအပ်ပါသည်။
ပိုင်ရှင်ပင်နယ်တီမပါဘဲ3ကြိမ်ဖို့ငှားရမ်းတက်ပယ်ဖျက်နိုင်သည် သူငှားရမ်း၏အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. သို့မဟုတ်မမြင်နိုင်တဲ့ခွအေနမြေား၏အမှု၌မဆိုမိတာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိနေသည်ဆိုပါက။ ပိုင်ရှင်လည်း support@rentacarclub.com ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင် 'လက်ငင်းဘွတ်ကင်' option ကိုပိတ်ထားနိုင်ပါလိမ့်မည်
သူတို့ရဲ့ခရီးစီစဉ်သည့်အခါငှားရမ်းသူတို့ရဲ့အငှားကတိကဝတ်ဂုဏ်ပြုခြင်းပိုင်ရှင်တွေပေါ် မူတည်. နေကြတယ်, ဒါကြောင့်လက်ငင်းဘွတ်ကင်မော်တော်ကားပြက္ခဒိန်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောရက်စွဲများအပေါ်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်ရန်လိုအပ်သည်။
တစ်ချက်ချင်းဘွတ်ကင်ဖျက်သိမ်းလိုက်သည့်အခါ, မော်တော်ကားပိုင်ရှင်များသည်အောက်ပါအချက်များပေါ်တွင် မူတည်. တစ်ဦး ဖျက်သိမ်းခြင်းအခကြေးငွေပေးချေရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်:
အဆိုပါဘွတ်ကင်ထက်ပိုမို3ရက်အတွင်းစတင်ပါလိမ့်မည်ဆိုပါက, RentaCar Club အဆိုပါငှားရမ်းများအတွက်ငှားရမ်းပြန်အမ်းပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကားပိုင်ရှင်နှစ်ဦး၏အမြင့်ဆုံးပမာဏဖြစ်ပါတယ်သမျှငှားရမ်းစျေးနှုန်းမှာ 1% သို့မဟုတ် 500 ဘတ်ပေးဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။
ဒီပထမဦးဆုံးလက်ငင်းဘွတ်ကင်သည်ဆိုပါကဖျက်သိမ်းနှင့်ငှားရမ်းကာလထက်နည်း 72 နာရီအတွင်းစတင်သတ်မှတ်, RentaCar Club အဆိုပါငှားရမ်းများအတွက်ငှားရမ်းပြန်အမ်းပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကားပိုင်ရှင်အငှားစျေးနှုန်း၏ 5% သို့မဟုတ်နှစ်ခု၏အမြင့်ဆုံးပမာဏဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲ 1000 ဘတ်ပေးဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။
ဒီဒုတိယလက်ငင်းဘွတ်ကင်ဖျက်သိမ်းလိုက်ခြင်းနှင့်ငှားရမ်းကာလထက်နည်း 72 နာရီအတွင်းစတင်သတ်မှတ်ထားလျှင်, RentaCar Club အဆိုပါငှားရမ်းများအတွက်ငှားရမ်းပြန်အမ်းပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကားပိုင်ရှင်အငှားစျေးနှုန်း၏ 10% သို့မဟုတ်နှစ်ခု၏အမြင့်ဆုံးပမာဏနှင့်ကားတစ်စီးချက်ချင်းဘွတ်ကင်မှဖယ်ရှားပစ်မည်ဘာပဲ 2000 ဘတ်ပေးဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။
You can refer to our complete list of စည်းမျဉ်းများနဲ့အခြေအနေများ.
ပိုင်ရှင်ဖျက်သိမ်းသည့်အခါအဆိုပါငှားရမ်းအမြဲတမ်းပြည့်စုံပြန်အမ်းငွေကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်။ ငှားရမ်းကားတစ်စီးပိုင်ရှင်တော်တော်များများဖျက်သိမ်းမှုစေသည်သောအခါ, ပိုင်ရှင်ပလက်ဖောင်းမှဖယ်ရှားပစ်မည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည့်ရွေးချယ်မှုဟာသူတို့ရဲ့ငှားရမ်းထားသောမော်တော်ယာဉ်၏ရရှိမှုအပေါ်အားကိုး။